ကောင်းမွန်သော Nick မရှိပါ - Melissa Joan Hart နှင့် Sean Astin တို့သည် Netflix ဟာသတွင်သရုပ်ဆောင်မည် - Netflix မူရင်း
ကောင်းမွန်သော Nick မရှိပါ - Melissa Joan Hart နှင့် Sean Astin တို့သည် Netflix ဟာသတွင်သရုပ်ဆောင်မည်
Los Angeles, CA - ဇန်နဝါရီ 21: မင်းသား Sean Astin သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Los Angeles ရှိဇန်နဝါရီလ ၂၁, ၂၀၁၈ တွင် The Shrine ခန်းမ၌ ၂၄ နှစ်မြောက်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များအစည်းအရုံးဆုကိုတက်ရောက်သည်။ 27522_010 (Christopher Polk / Getty Images မှ Turner အတွက်ပုံများ)
အာဒံကို Sandler ရဲ့အသစ်ဟာသအထူးအောက်တိုဘာလအတွက် Netflix ကမှလာမယ့်နေသည် Flash ရာသီ ၅ ခုပြသခဲ့သည်
Melissa Joan Hart နှင့် Sean Astin တို့သည် Netflix ၏မူရင်းဟာသ No Good Nick တွင်သရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
Netflix သည် Melissa Joan Hart နှင့် Sean Astin တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည့်ဟာသစီးရီးသစ်တစ်မျိုးကိုမှာယူခဲ့သည် ပြီးစီးရမည့်နောက်ဆုံးအချိန် ။ စီးရီးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ် ကောင်းသောနစ်ခ်မရှိပါ Siena Agudong၊ Kalama Epstein နှင့် Lauren Lindsey Donzis တို့လည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
အရ Netflix No Good Good Nick သည် ၁၃ နှစ်အရွယ်ရှိမိသားစုကိုသူမလျှို့ဝှက်အစီအစဉ်ဖြင့်လမ်းပေါ်တွင်သွက်လက်သောအနုပညာရှင်တစ် ဦး အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းမပြုမီမိသားစုတွင်လည်ပတ်နေသည်။
လက်ျာဘက်, စိတ်ဝင်စားဖို့အသံ? ငါ Netflix ရဲ့လာမယ့်ကြီးမားတဲ့ဟာသလျှင်ဤလျှင်ကြည့်ဖို့စပ်စုမိပါတယ်။ ဒါဟာကြီးစွာသောသွန်းနှင့်အတူအလားအလာရှိပါတယ်တူသောပုံရသည်။
ဖတ်ရမယ်: Netflix crossover ၂၅ ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်ပျက်ရန်အိပ်မက်မက်သည်
Netflix သည်တွစ်တာတွင်လည်းသရုပ်ဖော်ပုံနှင့်အတူသတင်းကိုကြေငြာခဲ့သည် ကောင်းသောနစ်ခ်မရှိပါ။
။ @MelissaJoanHart & @SeanAstin No Good Nick ဇာတ်ကားသစ်တွင်သရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီးအသက် (၁၃) နှစ်အရွယ်ရှိမိသားစုအားသူမအတွက်လျှို့ဝှက်အစီအစဉ်များနှင့်အတူလမ်းပေါ်တွင်ရှိသည့်စမတ်ကျသောအနုပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်ကိုသဘောပေါက်ခြင်းမတိုင်မှီမိသားစုတွင်လှည့်ပတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ pic.twitter.com/VAw0p7giFC
- နောက်လာမည့်အရာ (@seewhatsnext) တွင်ကြည့်ပါ။ စက်တင်ဘာ 21, 2018
vampire ဒိုင်ယာရီ netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အခါ
ဒါက Netflix ကကောင်းတဲ့ပစ်ကပ်တစ်ခုပဲ။ ဒါက Netflix ပရိတ်သတ်တွေဝိုင်းရံနိုင်တဲ့ပြပွဲကောင်းတစ်ခုလို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ streaming ကွန်ယက်သည်သူတို့၏ multi-cam ဟာသနှင့်ကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည် ကောင်းသောနစ်ခ်မရှိပါ အားလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်။
Netflix ဟာသကို ဦး ဆောင်သည့် Astin နှင့် Hart သည်အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွေ့အကြုံရှိသောလူကြိုက်များသည့်သရုပ်ဆောင်နှစ် ဦး ဖြစ်သည်။ Astin မကြာသေးမီကအတွက်ပေါ်ထွန်းအတူ လူစိမ်း ၂၊ ကိုယ့်ကိုသူ့အဘို့ညှိလိမ့်မည်ဟုအနည်းငယ်ပရိသတ်တွေထက်ပိုရှိပါတယ်။
လူတိုင်း Hart မှသိတယ် ဆယ်ကျော်သက်စုန်းမ Sabrina ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Netflix ကသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းကိုထုတ်လုပ်နေလို့ပါ။ Sabrina ၏ Chilling Adventures, အရာအောက်တိုဘာ 26 ရက်နေ့တွင် Netflix အပေါ် Premieres ။
No Good Nick အတွက်ထုတ်ပြန်မည့်ရက်ကိုနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်မတင်ရသေးပါ၊ သို့သော် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်စီးရီးများပြသမည်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ Netflix သည်ရာသီနှင့်အပိုင်း ၁၀ ပိုင်းပါသည့်အပိုင်းများကိုသူတို့နှင့်အတူတူခွဲဝေမည်လားဆိုသည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့မကြားရပါ။ မွေးမြူရေးခြံ နှင့်တူသောအခြားမူရင်းပြပွဲ။
ငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းပိုမိုသိစေရန်သေချာပါလိမ့်မည် ကောင်းသောနစ်ခ်မရှိပါ နှင့် Netflix ကအပေါ်၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲ။ ဆက်ပြီးနားထောင်ပါ!
ရာသီ2မှာချစ်ခြင်း
Bates မိုတယ်ရာသီ5netflix လွှတ်ပေးရန်
Quantico ရာသီ2ရက်နေ့တွင်ပြန်လာပါဘူးသည့်အခါ
ငါ blackkklansman ဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ